Ahoana ny fitazonana ny fahasalaman'ny bateria iPhone - Victor Mochere
Ny fiainana bateria dia ny fotoana andehanan'ny fitaovanao alohan'ny ilana hamerenana azy io. Ny androm-piainan'ny bateria dia ny fotoana maharitra ny bateria mandra-pahatongany mila soloina. Ny fanavaozana ny lozisialy ao amin'ny fitaovana iOS dia matetika misy teknolojia fitsinjarana angovo mandroso. Noho izany dia tokony ho azonao antoka foana fa ny fitaovanao dia manana ny kinova farany an'ny iOS, macOS, na watchOS. Ny sasany amin'ireo torohevitra dia manalava ny androm-piainany ho an'ny iPhone, iPad, ary iPod touch dia ny manavao ny rindranasa farany farany, manatsara ny toe-javatra misy anao, mamela ny Mode Power Low, mahita ny fampahalalana momba ny fampiasana batterie ary ny plugin ary ny herinao amin'ny solo-sainanao.
Ireto ny dingana tokony harahina mba hanana bateria iphone salama.
1. Vaovao farany ny iPhone
2. Atsaharo ny famirapiratan'ny fampisehoana na ampodio ny famirapiratan-tena
3. Fampandehanana fomba maody ambany
4. Sakano ny fampiharana tsy hamelombelona ao aoriana
5. Vonoy ny serivisy ho an'ny fampiharana
Mandehana any amin'ny toe-javatra iPhone ao amin'ny iOS fitaovana
Kitiho ny 'Safidy ankapobeny'
Kitiho manaraka ny 'fanavaozana ny lozisialy'
Zahao eto ny fanavaozana misy. Ampidiro indray ny baterinao ary havaozy ny iPhone
Azonao atao koa ny mampiditra ny iPhone ao anaty solosainao ary manavao azy amin'ny kinova iTunes farany
Azonao atao ny mamonjy ny androm-piainanao amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famirapiratan'ny efijeryo, amin'ny fampiasana wifi, na amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny famirapiratan'ny efijery iPhone anao
Sokafy ny 'Control center' amin'ny fitaovana Apple anao
Sintomy mankany amin'ny farany ambany amin'ny efijery ilay tsipika fahazavana
Raha hampiasa ny safidy famirapiratan-tena dia tsindrio ny 'Settings'
Tsindrio 'General' ary avy eo dia paompy ny 'Accessibility'
Paompy manaraka ny 'Asehoy ny fonenana'
'Mametraha famirapiratan-tena' ho 'On' izao
Ampifamadiho amin'ny maody ambany herinaratra amin'ny fotoana latsaky ny 20% ny batterinao iPhone
Handray fampandrenesana ianao hahafahana mamela ny maody ambany herinaratra ary azonao atao ny mamadika azy amin'ny paompy iray
Azonao atao ihany koa ny manodina ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny 'Settings'
Kitiho ny efijery ary kitiho ny bateria
Manaraka, ampifamadiho ny maody ambany ho an'ny 'On'
Tsindrio ny 'General'
Kitiho ny 'Background App Refresh'
Safidio ny safidy 'Off' hamono azy ao aoriana manontolo
Tsindrio ny bokotra 'Privacy'
Kitiho ny 'Serivisy eo an-toerana' ary zahao ny lisitry ny fampiharana mampiasa serivisy toerana
Hevitra fironana amin'ny fanaingoana zaridaina